နေအိမ် » လှုပ်ရှားမှု » Oppa Gangnam Style Run
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Oppa Gangnam Style Run
ဖေါ်ပြချက်: Big အစ်ကိုကသူ့ခေတ်မှီနှင့် Hilary စတိုင်နှင့်အတူ Gangnam ခရိုင်အရူးပြေးသွား။ ရိုင်းသော Get နှင့် Gangnam အတွက်လူကြိုက်များဖြစ်လာ! Oppa Gangnam Style ကို Run ကို Run ကို !!!
ကစား: 615,562 tag ကို: ဂန်းနန်းစတိုင်, Gangnam စတိုင်ဂိမ်း, ပွေးသှား, အပြေးဂိမ်း, ပျော်စရာ, ရယ်စရာဂိမ်း, PSY, PSY ဂိမ်း
အ trampoline အပေါ်ခုန်များနှင့်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရဖို့တတ်နိုင်သမျှအများအပြားမဲဖမ်းရန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Donald Trump ၏ဥက္ကဋ္ဌများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုကူညီပါ။ အကို Trump ပြိုင်ဘက်နှင့်အတူကွဲသွားရင်ဖို့မစမတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ Trumpoline Donald Trump ဂိမ်း
သင်က Nickelodeon ရဲ့အများဆုံးဆိုးသောလူကြမ်းအဖြစ်နှိမ်နင်းရန်ကြာသောအရာကိုများထင်ကြသလော Nickelodeon ရဲ့မဒါ Ultimate သူဌေးကစစျပှဲမြား, တစ်ဦးအခမဲ့အွန်လိုင်းဂိမ်းထဲမှာ, သင့်အကြိုက်ဆုံး Nickelodeon သူရဲကောင်းကိုရွေးချယ်ပါနှင့်ဆိုးသောလူကြမ်းနှင့်အတူဦးခေါင်းဦးခေါင်းကိုသွားဖို့အဆင်သင့်ရ! ဤသည်, f
ဟယ်လို Batman Run ကို, စွန့်စားမှုအားကစားပြိုင်ပွဲ, ဟယ်လိုအားကစားပြိုင်ပွဲ, နယူးဟယ်လိုအားကစားပြိုင်ပွဲ, Atozonlinegames
SpongeBob ဟယ်လို Run ကိုအကွာအဝေးအပြေးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ်ဝေးတတ်နိုင်သလောက်ပြေးခုန်ဖို့ဟယ်လို SpongeBob ရွှေဖရုံသီးကိုကူညီပါ။ သင်တတ်နိုင်သလောက်အများအပြားရမှတ်ဂိုးသွင်းဖို့ကြိုးစားအဖြစ်ဖွင့်အဆုံးမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ အပိုမှတ်ရဖို့အသီးအသီးမိုင်မှာရွှေဖရုံသီးစုဆောင်း
အ thundermans ဒေါက်တာ။ ပြေးအပေါ် colosso
အ Run ကိုအပေါ် Thundermans ဒေါက်တာ Colosso ။
ဒေါက်တာ Colosso ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးသူသည်ဤပျော်စရာအွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုဂိမ်းထဲမှာ Thunderman လေးတွေ evading စောင့်ရှောက်ရန်သင်၏အကူအညီလိုအပ်သည်။ အ Run ကိုအပေါ် Thundermans ဒေါက်တာ Colosso, တစ်ဦးအခမဲ့အရေးယူမှုဂိမ်း, အ Thundermans တွေ့ရှိ
Donald Trump whack
သငျသညျကဟောင်းနွမ်းလူမျိုးရေးခွဲခြား douchebag နားထောင်ပြီးငြီးငွေ့ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော လုပ်ဖို့တစ်ဦးတည်းသာအရာရှိတယ်။ အကို Trump Whack! ဒီပျော်စရာဂိမ်းထဲမှာမိမိနှုတ်ကိုပိတျထားဖို့အားလုံးကိုကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများကိုရှာပါ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ!
undertown ပြေးသမား omniverse ben 10
ဘင်အ 10 Omniverse ဂိမ်း Play, Undertown Runner အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သငျသညျဗင် 10 ဂြိုလ်သား Armodrillo, Crashhopper နှင့် Cannonbolt featuring ဂိမ်း၌ဒုစရိုက်၏တပ်ဖွဲ့များကဆန့်ကျင်ကထွက်တိုက်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။ Undertown Runner နှင့်အခြားအကြီးအအခမဲ့ဘင် 10 ဂိမ်း Play ။
ဝှားမုလန် mushu ဒုံးပျံအလုအယက်
ဝှားမုလန်: Mushu ဒုံးပျံ Rush ။ Mushu အချက်များကိုစုဆောင်းကူညီပါ!
ရဲအရေးယူဆောင်ရွက်မှုနှင့် Hilary ဇာတ်ကောင်များ၏အပြည့်အဝ, ပျော်ရွှင်စရာအပြည့်ဖြည်ဝှားမုလန်ဂုဏ်အသရေ, ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်မိသားစု၏အရေးပါမှုကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့။ လိမ္မာပါးနပ်သောဝှားမုလန်ဇ၏အပြင်ဘက်သူမ၏တန်ဖိုးရှိထေူ
trumpoline donal သောတံပိုးမှုတ်ဂိမ်း
အ trampoline အပေါ်ခုန်များနှင့်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရဖို့တတ်နိုင်သမျှအများအပြားမဲဖမ်းရန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Donald Trump ၏ဥက္ကဋ္ဌများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုကူညီပါ။ အကို Trump ပြိုင်ဘက်နှင့်အတူကွဲသွားရင်ဖို့မစမတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ Trumpoline Donal ကို Trump ဂိမ်း
ရယ်စရာ moto x3m3မျိုးနွယ်
နောက်တဖန်အသင်တို့၏မော်တော်ဆိုင်ကယ်ထွက်ရ! Moto X3M3အတားအဆီးများ, အမြန်နှုန်းနှင့် position နဲ့ဆက်ဆံ၏အပြည့်အဝကိုပိုမိုအဆင့်ဆင့်ဆောင်တတ်၏။ ကံကောင်းပါစေ!
ပူဖောင်းရဲ့ဒါဟာစို့, စတီဗင်ကစားသမားဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ပူဖောင်းဖယ်ရှားပစ်ရန်ပူဖောင်းရိုက်ဘယ်မှာတခုအဆုံးမဲ့ပွဲစဉ်3Arcade ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သူလုပ်နိုင်အဖြစ်အဆိုပါကစားသမားမရှိပူဖောင်းကိုချော်ရည်တွင်းထဲသို့ကျရောက်ကြောင်းအဖြစ်အများအပြားပူဖောင်းဖယ်ရှားပစ်ရမည်ဖြစ်သည်။
Steven ဝဠာကိုသင့်ရဲ့ခြေလှမ်း Steven စောင့်ကြည့်
စတီဗင်ဠာသင့်အဆင့်စတီဗင်အွန်လိုင်း Watch Play ။ စွန့်စားမှုအချိန်ကနေကာတွန်းကွန်ယက်ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူအွန်လိုင်းဂိမ်း Play, Gumball, ဘင် 10, ပုံမှန်ပြသပါ, အဆိုပါ Powerpuff မိန်းကလေးများ, ကျနော်တို့ကိုရှင်းလင်းသောဝံ, ဆယ်ကျော်သက်ဖို့အတွက် Titans တွေက, စတီဗင်ဠာ, ဦးလေးအဘိုးနှင့်များစွာသောပိုပြီး
Funny Game ကရူးသွပ်နေ့ Play ။ သူ့ကိုဤနေ့သူ၏မစ်ရှင်ပြီးစီးခြင်းကိုကူညီပါ။ ဘော့နှင့်သူ၏တပါးရန်သူများကိုအကြောင်းစွဲလမ်းကို flash ဂိမ်း။ သင့်ရဲ့အေးမြကားတစ်စီးမောင်းခြင်း, သေနတ်အားသွင်းခြင်းနှင့်မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့အဆင်သင့်မရ။ ကြီးမားတဲ့သေနတ်, ခုန်နဲ့ ba အတွက်အနိုင်ရအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကပစ္စည်းတွေသုံးပါ
အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်မှော်ရဲတိုက်
စိမ်းလန်းသောဝက်သဖြင့်ဓားစာခံပြန်ပေးဆွဲနှင့်ကျင်းပသူအကြီးအ wizard ကိုကယ်တင်ရန်အားလုံး၎င်း၏မှော်သုံးစွဲဖို့ဒီငှက် Angry Bird ကိုထောက်ခံခဲ့သည်။ ပလက်ဖောင်းအကြား Skip နှင့် Magician သည်အဘယ်မှာရှိအိမ်ပြန်ရဖို့ဝက်အတွက်မှော်ရိုက်ကူး
mr bean ကိုအန္တရာယ်များတဲ့ပိရမစ်
ဒီဂိမ်းမှာတော့မစ္စတာ Bean ကိုဒီစွန့်စားမှုပြီးစီးခြင်းနှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာအိမ်ပြန်လာဖို့ရှိပါတယ်။ သူ့ကိုရွှေ့ဖို့နဲ့ arrow key ကို အသုံးပြု. လမ်းလျှောက်ကူညီပါ။
အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်ပြစ်ဒဏ်
Angry Birds ဂိမ်းငှက်အစိမ်းရောင်ဝက်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်အစိမ်းရောင်အလံနှင့်အတူရွေးကောက် finish ကိုလိုင်းဖြတ်ကူးဖို့ကိုကူညီပါ။ Angry Birds ဂိမ်းငှက်၏မစ်ရှင်ကိုအဆုံးသတ်နိုင်အများအပြားအတားအဆီးရှိပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားရာကြောင်းသတိထားပါ
အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည် Stella ကယ်တင်ရန်
ဧဒုံ Angry Birds ဂိမ်း Angry Birds ဂိမ်းရွှေ့အပေါင်းတို့နှင့်ဥများ, အလမ်းအတွက်ပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းရန်မြှား key ကိုသုံးမကောင်းပါ piggy ဖမ်းဆီးသူ Stella, ကယ်တင်ရန်ရှိပါတယ်။
အ Simpson ကွာ2run
ဒီဂိမ်းထဲမှာ, Bart Simpson လမ်းကိုကျော်ပြေးသူကိုအတားအဆီးကိုရှောင်ရှားဖို့ရှိပါတယ်။ သူ့ကိုပိုပြီးဝေးပြေးခြင်းနှင့်ရမှတ်ရကိုကူညီပါ။
mr bean ကိုမှောင်မိုက်ရဲတိုက်မှလွတ်မြောက်ရန်
မစ္စတာ Bean ကိုဒီမှောင်မိုက်ရဲတိုက်ကနေအိမ်ပြန်ဖို့လမ်းကိုကူညီရှာဖွေရွှေ့နှင့်ခုန်ဖို့နဲ့ arrow key ကိုသုံးမယ့်ပြေးပြေးကြကုန်အံ့။
အမျက်တော် ထွက်. မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်ပြေး
Angry Birds ဂိမ်း Run Play နဲ့ပျော်စရာရှိသည်။
တောတွင်း Boy တောတွင်း၌ကြီးစွာသောစွန့်စားမှုစတင်ခဲ့သည်။ သူက hidden ဘဏ္ဍာကိုရှာနေင်သူကတိရိစ္ဆာန်မိတ်ဆွေများအကူအညီဖြင့်သူ၏လမ်းရှာတွေ့ဖို့ရှိပါတယ်။ သူဟာကြောင့်ဘဏ္ဍာကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပေကြောင့်ဒါပေမဲ့သင်ကူညီမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်သတ္တိနှင့်ဒါဖော်ရွေသည်
Johnny Bravo ဆိုက်ဘာစစ်ပွဲ
သငျသညျဒီဂိမ်းထဲမှာဂျော်နီ Bravo, ကိုချစ်ကြ, ဂျော်နီ Bravo ကသူ့သေနတ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ပယ်ရှားတစ္ဆေမြို့ကနေ run အပေါင်းတို့နှင့်ရန်သူရိုက်ကူးနေတဲ့မစ်ရှင်ရှိပါတယ်။
သွေးထွက်သံယိုဟယ်လို omniverse ben 10
ဒီဂိမ်းထဲမှာ, ဘင် 10 တစ်ဦးကသူ့မိတ်ဆွေတွေကိုဒီမစ်ရှင်ပြီးအောင်သူ့ကိုကူညီ, သူ့မြို့အပေါင်းတို့၌နဂါးကိုသတ်ပစ်ရန်မစ်ရှင်ရှိသည်။ ပိုပြီးရမှတ် Get အပေါင်းတို့နှင့်တကွအဆင့်ဆင့်ဖြတ်သန်းရတယ်။ ကံကောင်းပါစေ!
Johnny Bravo ပြေးသောသူသည်
ဒီဂျော်နီ Bravo အကြောင်းစီးရီးဂိမ်းရယ်စရာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့မစ်ရှင်သူ့ကိုလုံခြုံစွာအိမ်သို့ပြေးကိုကူညီသည်။
mr bean ကိုဖမ်းပိုးစုန်းကြူး
မစ္စတာ Bean ကိုပိုးစုန်းကြူးဖမ်းရန်ဥမင်ထဲမှာပျံသန်း။ ဥမင်ထဲမှာဖားနှင့်လင်းနို့ရှိပါတယ်လည်းပိုးစုန်းကြူးဖမ်း, သငျသညျမစ်စတာ Bean ကိုသူတို့ကိုမထိကြဘူး, လင်းနှင့်ဖားဖို့ဖြစ်နိုင်, ကျေးဇူးပြု. အာရုံစူးစိုက်မှုအဖြစ်အများအပြားပိုးစုန်းကြူးဖမ်းကူညီပေးပါတယ်။